HELLEN KELLER - Saamionline.com - The Largest online shopping in Somali Region.
gabadh arrimaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba u dhaqdhaqaaqda. Indhaha iyo dhegaha ayay naafo ka ahayd. Ugu horreyn iyada oo caafimaadqabta, misana lixda laxaadba qabta ayay dhalanaysaa. 19 bilood marka ay jirsato ayay xummadi ku dhacaysaa. Muddo ayay la ildarnaanaysaa. Waxa ay muddo la jiiftaba xummaddii baa ka ba’aysa. Xummaddii way ka ba’day, se waxa ay kaga tagtay indhala’aan iyo dhegala’aan. Labadii laxaad ee lixda laxaad ugu mudnaa ayay waayaysaa! Dam!
HELLEN KELLER quantity
Helen Keller, waxa ay ahayd qoraa, macallimad, tababbare nololeed, & gabadh arrimaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba u dhaqdhaqaaqda. Indhaha iyo dhegaha ayay naafo ka ahayd. Ugu horreyn iyada oo caafimaadqabta, misana lixda laxaadba qabta ayay dhalanaysaa. 19 bilood marka ay jirsato ayay xummadi ku dhacaysaa. Muddo ayay la ildarnaanaysaa. Waxa ay muddo la jiiftaba xummaddii baa ka ba’aysa. Xummaddii way ka ba’day, se waxa ay kaga tagtay indhala’aan iyo dhegala’aan. Labadii laxaad ee lixda laxaad ugu mudnaa ayay waayaysaa! Dam!
Helen, aqoonta yaraan ayay ku bilowday iyada oo indhaha iyo dhegahaba la’. Dugsi hoose ayay ka bilowday illaa ay dhammaysay. Dugsiga marka ay dhammayso jaamacad ayay galaysaa; oo waxa ay noqonaysaa qofkii ugu horreeyay ee NAAFO ah ee Shahaadada Farshaxanka qaata. Halganka way wadaysaa illaa Ph.D ay gaadho. In ka badan 37 dal oo shanta qaaradood ee adduunka ku yaalla ayay maraysaa oo dhiirrigelin, iyo dalxiisba u tagaysaa.
Hibooyinka ay lahayd waxaa ka mid ahaa qoraalka oo waxa ay qortay wax ka badan 18 buug oo dunida daafaheeda ka caan ah, waxaa ugu caansan buugga la yidhaa ‘Story of My Life’ oo in ka badan 50 luuqadood loo tarjumay. Kan ku horyaallana mucdiisa ayaa laga soo xigtay buuggaa.
Hadda ogow oo Helen, marka aan ku leeyahay ‘Wax bay baranaysaa… Qoraysaa…’ waa DAM oo indhaha iyo dhegahuba way bannadan yihiin. Sidee wax u baranaysaa?! Sideese wax u qoraysaa? Sidee ayay indhala’aanta ula tacaashay? Sidee ayay u arkaysay? Qofka laxaadka naafada ka ah macnaheedu ma waxba ma qabsan karaa? Maxay ani shakhsiyan macno ii samaynaysaa? Waa su’aalo iswayddiin mudan oo buuggu inoo qaadaa-dhigayo, waana meesha uu mawduucu daaran yahay buugguna ka duulayo. Buugga gudihiisa ayaynnu ku bandhigi doonnaa waxa aynnu uga golleennahay.”
Quruxda Iyo Baahida Gaarka ah
LA LUTTE DE KOOMBE: RÉCIT D’UN SOMALI EN EXIL( French)
Qofku Waa Sida Uu U Fakaro
Buuga Nafaqada Dheeligatiran
1 QURUXDAADU MADBAKHAY TAALLAA
XALKA GAASKA, SONKORTA IYO DHI...